राजनैतिक ध्रुवीकरण ः औचित्य र आवश्यकता | BikalpaNews.com- the most popular online magazine of Nepal
Home Breaking News राजनैतिक ध्रुवीकरण ः औचित्य र आवश्यकता
राजनैतिक ध्रुवीकरण ः औचित्य र आवश्यकता
संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको संघारमा देशमा राजनैतिक ध्रुवीकरण भएको छ । यो ध्रुवीकरणलाई लिएर सकारात्मक र नकारात्मक दुवैथरिका टिप्पणीहरु बजारमा आएका छन् । कसैले यस घटनालाई सामान्य प्रक्रियाका रुपमा लिएका छन् त कसैले यसलाई राजनीतिको नयाँ कोर्षको रुपमा लिएका छन् ।
अहिले भएको ‘वामगठबन्धन’ र ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ यस्ता गठबन्धन विगतमा पनि भएका थिए हुन्छन् भनी हल्का टिप्पणी गर्नेहरु बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । हुन पनि एक महिना अघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन, एमाले राप्रपाबीचको गठबन्धन र सरकार बनाउँदा कहिले माओवादी कांग्रेसबीचको गठबन्धन त कहिले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन अनि कहिले एमाले माओवादीबीचको गठबन्धन हाम्रो अगाडि ताजै छ ।
अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राप्रपा लगायत मधेश केन्द्रित दलहरु घोषित अघोषित गठनबन्धन गरी आगामी निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कोशिस गरिरहेका छन् । यसमा माओवादीका कुनै दिनका दोस्रो तहका बाबुराम भट्टराई पनि जोडिएका छन् । त्यसैले गठबन्धन बन्नुको पछाडि २०४६ साल अगाडि पञ्चायतका विरुद्ध कांग्रेस र वाममोर्चाको गठबन्धन बनेको थियो । बहुदलकालमा सरकार बनाउन कांग्रेस, राप्रपा बीच मात्र भएन, एमाले र राप्रपाबीच गठबन्धन बनेको देखिन्छ ।
त्यसैले गठबन्धनको परम्परा नेपाली राजनीतिमा निकै पहिलेदेखि नै चल्दै आउँदा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा राजा ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध यो देशका कांग्रेस–कम्युनिष्ट लगायत मधेश केन्द्रीत दलहरु एउटै मोर्चा बनाएर निरकुंशता ढालेको देखिन्छ । अहिलेको गठबन्धन विशेषतः राजनीतिक अस्थिरताका विरुद्ध भनेर बुझ्नुपर्दछ । नेपालीको पीडा भनेको दललाई बहुमत दिएर मात्र हुने रहेनछ । किनकी बहुमत प्राप्त दलले पनि ५ वर्ष लगातार शासन गर्न सकेको देखिन्न ।
तत्कालीन स्वार्थ सिद्धका लागि बनेका यस्ता प्राकृतिक/अप्राकृतिक गठबन्धन हाम्रा राजनैतिक इतिहास बनेका छन् र हालको गठबन्धनलाई विगतका गठबन्धनसँग तुलना गरिँदै छ । विगतमा निर्वाचनको परिणामले गर्दा सरकार गठन गर्न गठबन्धन गर्ने प्रचलन भएको देखिन्छ । यसलाई सत्ता स्वार्थ गठबन्धन भन्न सकिन्छ भने अधिकारका लागि गरिएका गठबन्धनहरु २०४६ साल अघिको र २०६२/०६३ को आन्दोलनका लागि गरिएको देखिन्छ । अहिले परिस्थिति बदलिएकोले दुईवटा ठूला दलको नेतृत्वमा गठबन्धन हुनुको पछाडि चुनाव पश्चात् सरकार मात्र चलाउने नभै आफ्ना नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने उद्देश्यले गरिएको देखिन्छ । अबमा दिनमा चुनावका लागि मात्र नभै नीति र कार्यक्रम मिल्ने दलहरुबीच नै पार्टी एकताको लहर चल्नेछ किनकी सानो दल वा समूहले आफ्नो अस्तित्व जोगाएर आफ्नो राजनीति थामी राख्न सम्भव देखिँदैन ।
वर्तमान गठबन्धनप्रति थुप्रै आशंका र प्रश्न उठ्ने गरेका वा उठाइने गरेका देखिन्छ । जस्तो कि यो निर्वाचन पछाडि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकीकरण गर्दै अन्य वामशक्तिहरुलाई समेत एउटै पार्टीमा समाहित गर्ने घोषणा तथा प्रतिबद्धता सहितको गठबन्धन हो यो । त्यसैले यो वामगठबन्धनलाई हल्का ढङ्गले टिप्पणी गर्नु गलत हुनेछ । के यो निर्वाचन पछाडि साँच्चिकै पार्टी एकीकरण हुन्छ त ? नेपालमा अब के दुई पार्टी मात्रै हुन्छन् त ? आम मान्छेहरुको मनमा प्रश्न उठेका छन् । कतिपयले यो निर्वाचन पछाडि आउने मत परिणामका आधारमा मात्र पार्टी एकीकरणले बाटो लिनेछ नत्र फेरी पुरानै अवस्थामा फर्किनेछ भनेर विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । कतिपयले माओवादी केन्द्र सत्तालोलुप छ, अध्यक्ष प्रचण्ड व्यक्ति खेलाउन माहिर छन्, चुनावपछि फेरी कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँछन् र एमालेलाई प्रयोग मात्र गर्नेछन् भन्ने आँकलन तथा टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका एक थरि नेताहरु माओवादीलाई ४५ प्रतिशत सिट दिएर भए पनि सँगै राख्नुपथ्र्यो त्यसो गर्न सकिएन । अब चुनाव पछाडि पहिलो प्रधानमन्त्री कांग्रेसकै समर्थनमा प्रचण्डलाई बनाउनुपर्दछ भन्ने आशय, लेख, अन्तरवार्ताले थप मलजल गरेको छ । यदि त्यो भयो भने नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन फेरी एकपटक नेपाली समाजमा बदनाम हुनेछ । त्यस्तो बदनामी हुनबाट बचाउनु सबै वामपन्थी नेता कार्यकर्ताको जिम्मेवारी हो ।
आम नागरिकहरुले प्रश्न गरेजस्तै पक्कै पनि दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरण र एकीकरण पछाडिको अन्तरघुलन तथा भावनात्मक एकता त्यति सजिलो छैन । सैद्धान्तिक हिसाबले माक्र्सवादी भएता पनि स्कुलिङ्ग फरक छ । फरकफरक शैली र स्कुलिङ्गबाट प्रशिक्षित कार्यकर्ताहरुको पंक्ति छ ।
जनताका बीचमा सामाजिक तथा ऐतिहासिक चरित्र फरकफरक छन् । नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरु पुष्पलालको स्कुलिङ्गबाट प्रशिक्षित छन् । मनमोहन अधिकारीका सामाजिक न्यायको नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रभावित छन् र जननेता मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छन् भने माक्र्सवादलाई सैद्धान्तिक आधार मान्दछन् तर माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरु मोहनविक्रम सिंह स्कुलिङ्गबाट प्रशिक्षित छन् । माओवादलाई सैद्धान्तिक आधार मान्दछन् अनि प्रचण्डपथलाई नजानिँदो ढङ्गले वकालत गर्दछन् ।
जनयुद्धको नाममा हिंसात्मक बाटोबाट क्रान्ति सम्भव देख्दछन् । त्यसैले यी विभिन्न कार्यदिशा तथा स्कुलिङ्गका कारण सजिलै भावनात्मक एकता सहज छैन । तर विविधता बीच एकता हामीले खोज्न सक्नैपर्दछ । समाजवाद हामी सबैको साझा लक्ष्य हो । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हामी सबै नेपालीको सपना हो । यो साझा सपना पूरा गर्नका लागि लेनिनवादी संगठनात्मक ढाँचा भित्रका हामी कार्यकर्ता हौं । जनवादी केन्द्रीयता वामपन्थी कार्यकर्ताको साझा चरित्र हो जुन हाम्रा कार्यकर्तामा विद्यमान छ ।
इतिहासको समीक्षा, वर्तमान नेपाली समाजको विश्लेषण र भावी नीति तथा कार्यक्रममाथिको एकरुपता, पार्टी एकीकरणको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो । सबै खाले सामन्त तथा निरंकुशतासँगको लडाईं हाम्रो इतिहास हो । मानवीय अधिकार प्राप्तिको लडाईं हाम्रो इतिहास हो । छुटफुट बाहेक राजनैतिक तथा अधिकारको लडाई सकिएको छ र हामी नवपूँजीवादमा प्रवेश गरेका छौं । हाम्रो वर्तमान नेपाली समाज अर्ध पूँजीवादी समाज हो । अब हामीले राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गर्दै समाजवादतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ । अब हाम्रा हरेक नीति तथा कार्यक्रम समाजवादी हुनुपर्दछ ।
केही नेता कार्यकर्ताहरु बाहेक सबैको विश्लेषण यही हो । एमालेको तथा दस्तावेज नै बनिसकेको छ भने अर्ध सामन्ती तथा अर्ध औपनिवेसिक नेपाली समाज देख्ने माओवादी केन्द्रका केही नेता कार्यकर्ताहरु अझै छन् । तथापि बृहत छलफल पछाडि साझा टुङ्गोमा पुग्न पनि अब कुनै आइतबारी छैन ।
हामी दुवै पार्टीको सैद्धान्तिक धरातलको चरित्र वर्गीय पक्षधरता हो । आगामी प्रमुख लडाई समृद्धिको लडाईं हो । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हाम्रो साझा सपना मात्र होइन एक कार्यक्रम तथा आन्दोलन नै हो । यी साझा बुझाइ पछाडि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको पार्टी एकता असम्भव प्रायः शुन्य हुन्छ ।
हामी हाम्रा आम कार्यकर्ता र नेपाली जनतालाई रत्तिभर ढाँट्नुहुँदैन । हाम्रा विगत तिता पनि छन् । हाम्रा थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरु हिजोका दिनमा माओवादीबाट मारिएका, लुटिएका, काटिएका, लखेटिएका, अङ्गभङ्ग भएका र पटकपटक प्रताडित भएका छन् । माओवादी केन्द्रको आँखामा एमाले सरकारमा बसेर र सरकारलाई सुराकी गरेर माओवादीलाई सिध्याउन खोजेको आरोपहरु पनि छन् ।
जननेता मदन भण्डारी भन्नुहुन्थ्यो, “राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्रु हुँदैनन् ।” यही भनाइलाई मार्गदर्शन मान्दै विगतको तितो यथार्थ हामीले बिर्सनै पर्दछ । हिजो हामी एक अर्का नमिल्दा के गुमायौं भन्दा पनि अब हामी मिल्दा नेपाली जनतालाई के दिन सक्छौं ? हामी कस्तो समाज चाहन्छौं भन्ने कुरालाई केन्द्रीयतामा राख्न सक्नुपर्दछ । हामी जनताका लागि जस्तोसुकै बलिदानी दिन तयार छौं भन्दै कसम खाएर राजनीतिमा लागेका हामी वामपन्थी नेता कार्यकर्ताको वास्तविक कसमको परीक्षामा हामी उत्तीर्ण हुनै पर्दछ ।
वामपन्थी मतको दुई तिहाई वर्चस्व भएको हामी सबैलाई थाहा छ । वामपन्थी नेता कार्यकर्तालाई खेलाएर सँधैं गैर कम्युनिष्टहरु विशेष गरी नेपाली कांग्रेसले सत्ता चलाएको पनि सर्वविदितै छ । २०४६ सालको ऐतिहासिक आन्दोलन पछाडि २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचन बाहेक सबै प्रकारका निर्वाचनहरु नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको र प्रत्येक निर्वाचनमा सत्ताको दुरुपयोग गरेको पनि कहिकतैं छिपेको छैन ।
कांग्रेसको सत्ता सञ्चालनका सन्दर्भमा उदार अर्थनीतिका कारण ठूला र महत्वपूर्ण उद्योग कलकारखाना तथा संस्थानहरु सबै धरासायी भएको इतिहास हाम्रो सामु छ । पछिल्ला ठूला योजना तथा परियोजनाहरु निर्माणमा सँधैं विदेशी ठेकेदारहरुलाई सुम्पेको र नेपाली जनतालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निकम्मा सावित गरेको पनि हाम्रो आँखा सामु नै छ । जसका कारण राष्ट्रिय पूँजी निर्माण हुन सकिरहेको छैन भने अर्थनीति सँधैं तरल अवस्थामा पुगेको छ । देशमा धनी र गरिबको खाडल दिनदिनै बढिरहेको छ । संसारकै धनीमध्येका व्यक्ति नेपालमा बस्छन् भनेर गर्व एकातिर गरिरहेका छौं भने सामान्य औषधी उपचार नपाएर सुत्केरी बितेका कथा जस्ता यथार्थहरु पनि हाम्रा सामु छन् ।
के हामी सँधैं नेपाललाई यस्तै बनाउन चाहन्छौं ? गरिबी के नेपालीको पहिचान हुन सक्दछ ? अवश्य हुन सक्दैन । त्यसैले सीमित र उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै समृद्ध नेपाल र्निाणको महाअभियानका सारथी हामी वामपन्थीहरु बीचको एकता आजको अपरिहार्यता आवश्यकता हो ।
पार्टी एकीकरण पछाडिको निरन्तरताको प्रश्न पनि गम्भीर रुपमा उठेको छ । नेपालका सबैजसो सानाठूला राजनैतिक दलभित्र देखिएको चरम गुटउपगुटका कारण पनि यस्ता शंका उपशंकाहरुले निकै प्रश्रय पाएका छन् । नेकपा एमालेभित्रको गुट उपगुट उत्तिकै हावी छ । उता २०६४ सालको नेकपा माओवादी यो १० वर्षमा ८–९ टुक्रामा विभाजित हुँदै मूलधार नेकपा माओवादी केन्द्रको नाममा विद्यमान छ । वाम गठबन्धनको एक साता नबित्दै हिजोको माओवादीका शक्तिशाली र प्रभावशाली नेता आजका नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले गठबन्धन तोडे । यस्ता घटनाले एकीकरणको पछाडि बृहत कम्युनिष्ट पार्टी माथि प्रश्न उठेको छ । एकीकरण पछाडि पार्टीलाई एक पार्टी बनाउन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष इमान्दारिता हो । हिजोका दिनमा एकले अर्कालाई लगाएका आरोप, कटुआलोचना, सबै एउटा कालखण्डमा थियो अब छैन भनी देश र जनतामाथि इमान्दारिता रहनुपर्दछ ।
जिम्मेवारी र अवसरको बाँडफाँड पनि महत्वपूर्ण आधार रहनेछ । योग्यता, क्षमता, क्रियाशिलता, इतिहास सबै पक्षको मूल्याङ्कन गरी अवसरको बाँडफाँड हुन सक्नुपर्दछ । सँगै वामपन्थी नेता कार्यकर्ताहरुको उमेर, समूह र हिजोको आन्दोलनमा संलग्नताका आधारमा सोच र विश्लेषण फरक–फरक छन् । हिजो अधिकार प्राप्तिको लडाईंमा जेलनेल भोगेका नेताहरुले अबको राजनैतिक परिवर्तनलाई फराकिलो ढंगले सोच्नुपर्दछ । जुन सोच र उद्देश्य प्राप्तिका लागि हिजो जेल नेल भोगेको हो, त्यो राजनैतिक जीत प्राप्त भएको छ ।
त्यो पुरानो र पाको पुस्ताप्रति सबैको सम्मान छ र उहाँहरु सम्मानित हुन जान्नुपर्दछ, सक्नुपर्दछ । आज जुन सोचका साथ वामपन्थी गठबन्धन तथा वामपार्टीहरुबीचको एकीकरण प्रक्रिया बढेको छ, त्यो सोचलाई सफलतामा बदल्नैपर्दछ । पक्कै पनि “सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल”को बृहत परिकल्पना सहित यो एकीकरण प्रयास भएको छ । समृद्ध नेपालको आधार स्थीर राजनीति, स्थीर सरकार र वैज्ञानिक जनवादी नीति तथा कार्यक्रम एवम् एक्काइसौं शताब्दीको विकास मोडेल हो । बाहिर सतहमा जे देखिएता पनि वास्तवमा यो एकीकरण र विकासवादी नीति तथा कार्यक्रमको अभियन्ता दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरु हुन् ।
त्यसैले नीति अनुसारको नेतृत्वमा मात्र नीतिले सफलता प्राप्त गर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता तथा सफल परीक्षण अनुसार नै शक्तिशाली अनुशासन आयोग निर्माण गरी पहिलो तहका नेताहरु रहने र नेतृत्वमा क्षमताको सही मूल्याङ्कन गरी दोस्रो तहमा नेताको नेतृत्वमा बहृत कम्युनिष्ट पार्टी सञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान गर्न सकेमा दीर्घकालीन एकीकरण र एकीकरणको वास्तविक सार्थकता हुनेछ । लेखक थापा नेकपा एमाले म्याग्दीको सचिवालय सदस्य हुन । नवविकल्प साप्ताहिकको वर्ष १० अंक ६ मा प्रकाशित